Porn-Induced Erectile Dysfunction (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn သည် PIED - Porn-Inced Erectile Dysfunction တွင်ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုနောက်ကွယ်ရှိသိပ္ပံပညာကိုဖော်ပြထားသည်။
ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆရာဂယ်ရီဝီလ်ဆင်သည်စိုက်ထူခြင်း၏ဇီဝကမ္မဗေဒကိုရှင်းပြသည်။ ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်အလွန်အကျွံထင်ဟပ်ခြင်း (လူငယ်များတွင်ပင်) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်ကြောင်းနှင့်အခြားသူများပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပုံကိုရှင်းပြသည်။ အများကြီးပိုသောအချက်အလက်များအတွက်ကြည့်ပါ ငါ၏အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောငါ၏အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) လား?
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 53 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်အားလုံးသည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 28 မကြာသေးမီက neuroscience-based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 55 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများ) ။ နောက်ထပ်စာမျက်နှာ porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံ 12 လေ့လာမှုများ.
: "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" porn သို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းပျောက်ကရှင်းပြသည်သောကလက်ခံစကားပြောအမှတ် Debunking လေ့လာမှု ၂၅ ခုကျော်ကလိင်နှင့် porn စွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိသည်” ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းစေသည်
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? လေ့လာမှု ၇၅ ခုကျော်ကညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးမျိုးကျေနပ်မှု။ လေ့လာမှုအနည်းငယ်တွင်အမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကျေနပ်မှုအပေါ်အမျိုးသမီးများ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းအများစုမှာမူ do ဆိုးကျိုးများကိုအစီရင်ခံပါ arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ
ယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူထိခိုက် porn အသုံးပြုမှု? တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများအထဲက Check - 40 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် - သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၁၃၅ ခု၏ဤ ၂၀၁၆ meta-analysis ၏အကျဉ်းချုပ် - မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်:
"? ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချမထားပါဘူး" ဘယ်သူမျှမက, မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားမကြာသေးမီနှစ်များတွင်မြင့်တက်ပြီ: "မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်လိုလားသူ porn ဝါဒဖြန့်လျစ်လျူရှု။ "See ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခြင်း၊နှင့် porn ၏ရရှိမှုတိုးမြှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းကိုလျော့နည်းစေခဲ့သည်မကြာခဏ - ထပ်ခါတလဲလဲအခိုင်အမာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှု။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 280 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်ဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 16။ သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံးမှသည် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
ပွိုင့်ခြင်းနှင့်ချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှုကဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်ပြောနေတာနီးပါးတိုင်း naysayer တစ် debunking များအတွက်: "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က။ ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ , 2015 (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ), ညစ်ညမ်းစွဲထောက်ပံ့ 50 အာရုံကြောလေ့လာမှုများကျော်ချန်လှပ်စဉ်.
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်: လူပျို၏ 30% ED (2012) ရှိ
အသစ်ရောဂါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလေးထဲကတစ်ခုမှာလူနာတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် နေ့စဉ်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်မှလူငယ်တစ် ဦး - စိုးရိမ်ဖွယ်ရုပ်ပုံလွှာ (2013)
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက် (2014) မှလိင်အတွေ့အကြုံရှိအလယ်တန်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများဝိသေသလက္ခဏာများ
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။
လေ့လာရေး: urology ပါမောက္ခကဟောပြောပွဲများ၏ PDF ဖိုင်ရယူရန် Carlo Foresta (2014)
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က: ဦးနှောက် Scan ဖတ် porn စွဲ (2014) ကိုရှာဖွေ
psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2012) တွင် subcortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏ Macrostructural ပွောငျးလဲ
Hypothalamus psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2008) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိအာရုံခံ၏ subpopulations အပေါ်စိတ်ကြွဆေးလုပ်ရပ်များ (2010)
စိုးရိမ်စိတ်လိင်စိတ်နိုးထ (1983) တိုးပွါး
အမျိုးသားများတွင်နောက်ဆက်တွဲလိင်စိတ်နိုးထ (1980) အပေါ်စိတ်ခံစားမှု arousal ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
သုတေသနကြောက်လန့် (2011) မှစ. စိတ်လှုပ်ရှားစရာရင်းမြစ်ရှာပြီး
ကျွမ်းကျင်သောသက်သေခံချက် - မီဒီယာအတွက် Porn- သွေးဆောင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: အဓိကအားကျွမ်းကျင်သူများ
YBOP 2011 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကကျော် (ဇန်နဝါရီ, 100) လိုင်းပေါ် လာ. , ကတည်းကဝန်ခံနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများပြုမူဆက်ဆံသူကို (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ဆောင်းပါးများထုတ်ဝေသို့မဟုတ်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်သည်ထင်ရှားပါပြီ။ မှတ်ချက်: ဆီးရောဂါပါရဂူအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသင်းနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အထောက်အထားနှစ်ကြိမ်တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးဟောပြောပွဲ၏ဗီဒီယို: porn-သွေးဆောင် ED (အစိတ်အပိုင်းများ 1-4) ကိုအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးညီလာခံ, မေလ 6-10, 2016 မှာပေးအပ်သည်။ ဆီးရောဂါပါရဂူ Tarek Pacha ။
နယူးတွေ့ရှိချက်: လေ့လာမှု porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) တို့အကြား link ကိုရှုမြင် - လာမည့်လေ့လာမှုမှအချက်အလက်များ၊ ၂၀၁၇ အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာညီလာခံတွင်တင်ပြသည်။
ဆောင်းပါးများ, ထုတ်လွှင့်ရေဒီယိုရှိုးများ, နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုတဲ့သူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်ကြောင်း, podcasts များစာရင်း:
လွန်းကအင်တာနက် Porn သင်ျခြို urology ပါမောက္ခ Carlo Foresta (2011) ဖြစ်ပေါ်စေ
အဆိုပါလူငယ်တူရကီ porn-သွေးဆောင် ED (2011) ဆွေးနွေးရန်
အလွန်အကျွံ Porning? ရောဘတ် Taibbi, LCSW (201 အားဖြင့်2)
Porn ED အားထောက်ကူပါသလား? Tyger Latham, Psy.D. အားဖြင့် ကုထုံး Matters အတွက် (2012)
ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကု Lim Huat Chye - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်လူငယ်များအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည် (၂၀၁၂)
Middlebury ကောလိပ်ကနျြးမာရေးစင်တာညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမာကု Peluso, ED အတွက်မြင့်တက်ရှုမြင်: porn (2012) အပြစ်တင်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: Porn အပေါ်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း၏စက်လှေကားစျေးနှုန်း (2012)
(2012): "သူတို့အများဆုံး virile မှာဖြစ်သင့်ပေမယ့်လူပျို၏တိုးပွားလာသောသူတို့ကိုနည်းနည်းအပြာရောင်ဆေးပြားမရှိဘဲရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မနိုင် Viagra စွဲ"
လူ့ hard disk ကို၏အမာခံအကျင့်ပျက်ခြစားမှု (2012)
အဆိုပါဒေါက်တာ Oz ကိုပြသပါ Porn-သွေးဆောင် ED (2013) အမှာစကား
ဆီးလမ်းကြောင်းဂျိမ်း Elist, FACS, FICS (2013) ကအင်တာနက်ကို Porn နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်,
Feminist စာရေးဆရာနောမိ Wolf ကဗြိတိန်လျော့နည်းလိင် (2013) ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်တစ်မငြိမ်ရှင်းပြချက်ရှိပါတယ်: ဘယ်လို porn အသက်ရှင်တော်မူသည်ခေတ်သစ်လိင်ဖျက်ဆီးနေသည်
Lawrence A. Smiley MD မှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2013)
ဆီးရောဂါပါရဂူအင်ဒရူး Kramer ED ဆြေးြေိံး - porn-သွေးဆောင် ED (2013) အပါအဝင်
Porn သင့်လိင်အသက်ကိုဖျက်ဆီးသလဲ? ရောဘတ် Weiss LCSW, CSAT-S က (2013) က
လွန်းကအင်တာနက် Porn: အဆိုပါ SADD Effect, မှ Ian Kerner ပါရဂူဘွဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ (2013)
Sudeepta Varma, MD စိတ်ရောဂါကုသမှု (2013) က porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်ဖြေရှင်းချက်,
porn-သွေးဆောင် ED အပေါ်ဒေါက်တာ Rosalyn Dischiavo (2013)
porn ကိုအစဉ်အမြဲငါ့ကိုအတိုင်ခဲ့သလား Salon.com (2013)
ရေဒီယိုပြရန်: Young ကစိတ်ရောဂါအထူးကုသူ့ Porn-သွေးဆောင် ED (2013) ဆွေးနွေး
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်၏ဗွီဒီယို - လူငယ်များတွင် ED ရောဂါဖြစ်စေသည့်အကြောင်းများတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုပါဝင်သည် (2013)
ခရစ် Kraft, Ph.D ဘွဲ့ကို - ဂျွန်ဟော့ကင်း sexologist porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2013) ဆြေးြေိံး
ဒေါက်တာ Alin Zoldbrod (2013) က, အင်တာနက် Porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအကြောင်းအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကလိင်ကုထုံးစိုးရိမ်
သင့်ရဲ့ယောက်ျားပီထိခိုက်အကဲခတ် "Normal" ကို Porn ဖြစ်သနည်း sexologist Maryline Décarie, MA (2013) က
'' Porn '' အိပ်ရာများတွင်ယောက်ျားကူကယ်ရာမဲ့စေသည်: ဒေါက်တာ Deepak Jumani, Sexologist Dhananjay Gambhire (2013)
နောက်တဖန်တစ်ဦးစိုက်ထူရဖို့သုံးမှငါးလကြာညစ်ညမ်းတဲ့အစားအစာလိုအပ်, အလက်ဇန္ Katehakis MFT, CSAT-S က (2013)
ရုံဒါဟာ Up ကို Get မပေးနိုင်: ZDoggMD.com (2013)
အချိန်ကုန်ခံပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းစေသောလူကိုကုသပေးသည်။ CBS ဗီဒီယို၊ Dr. Elaine Brady (2013)
ကယ်ရိုလိုင်း Cranshaw နှင့်အတူခုနစျပါး Sharp က - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ (2013) ကစေသောအဆိုပါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
အဖြစ်မှန်, စိတ်ရောဂါ Goran Sedvallson (ဆွီဒင်) အလုံအလောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆီးရောဂါပါရဂူ Stefan Arver, psychotherapist Inger Björklund (2013)
porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကောင်းတစ်ဦးအရာဒေါက်တာအဲလစ်ဇဘက် Waterman (2013) ၏အလွန်အကျွံနိုင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်
ဒန်ဗေ့ခ်ျ porn-သွေးဆောင် ED (12-2013) အကြောင်းကိုမေးခှနျးကိုဖွကွေား
အိုင်းရစ် Times သတင်းစာ: (2016) 'ငါသည်ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူညစ်ညမ်း watch မဟုတ်လျှင်ငါနှိုးဆွရမနိုင်' '
သိပ်ညစ်ညမ်းထံမှစိုက်ထူပြဿနာများ - ဆွီဒင် (2013)
အိန္ဒိယ (Porn-သွေးဆောင် ED), ဒေါက်တာ Narayana Reddy (2013) တွင် conjugation ဆက်ဆံမှုသူရဲသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း
ဆွီဒင် (2013): ညစ်ညမ်း Donald နှိုးဆော်ခြင်းတယ်သူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်
သိပ်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သူကိုယောက်ျားကတက်မရနိုငျသညျ, မန်ချက်စတာလိင်ကုထုံး (2014) ကသတိပေး
အဘယ်အရာကိုဒေါက်တာ Lohit K သည်, MD (2014) ?, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
Porn ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ထာဝစဉ်ဘဝအသက်ပျက်စီးခဲ့သလဲ The Daily ဆေးသောက်ရန်။ (2014)
ပညာရေးကနေဆငျးရဲဒုက်ခ? ဒါကအကြောင်းပြချက်မိုက်ကယ် S ကို Kaplan, MD (2014) က, သငျ့ကိုအံ့အားသငျ့နိုင်ပါစေ
ဘန်ဂလိုများတွင်မြင့်တက် porn စွဲလား? (2014)
Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်, ကို Global News, ကနေဒါ (2014): အဆိုပါမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နောက်ကွယ်မှ
'Generation အဖွဲ့က X-rate' (Porn-သွေးဆောင် ED) - ဆီးလမ်းကြောင်း အာဗြဟံသည် Morgentaler (2014)
ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလုလင်တို့သည်, အန္ဒြေ Doan MD, Ph.D (2014) တွင် porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု
ဆယ်ကျော်သက် porn စွဲ၏ကပ်ဘေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Wrishi Raphael, MD (2014)
ကမ္တာ့သတင်းကနေဒါ (2014) ကလူပျိုတို့အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်စေတဲ့ porn,
တိုက်ရိုက်ဘလော့ခ်: Porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဒေါက်တာအာဗြဟံသည် Morgentaler, ဂါယူဆပါသည် (2014)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒ David B Samadi & Muhammed Mirza (၂၀၁၄)
အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည်သင်၏လိင်ဘဝကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်ဟုဆရာဝန်ကပြောကြားသည်။ Harry Fisch, MD (၂၀၁၄)
IRL Erectile ပြဿနာများစေအွန်လိုင်းဗီဒီယို? အင်ဒရူး Smiler Ph.D (2014) က
သငျသညျလွန်း Masturbate သလား? ဆီးရောဂါပါရဂူ Tobias Köhler, ကုထုံးဒန် Drake (2014)
Jed စိန် Ph.D (2014) က, ခုနှစ်တွင်ရီးရဲလ်ဘဝကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်လုပ်နည်းအွန်လိုင်းလိင်စိတ်ကြွဆေးကိုပို့ဆောငျနိုင်သလား
ED မှပံ့ပိုးလွန်း Porn: ဆီးလမ်းကြောင်း Fawad ဇဖား (2014)
Porn Erectile အလုပ်မဖြစ်အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်လား? Kurt Smith က LMFT, LPCC, ကို AFC (2015) က
porn စွဲ, porn တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်အားဖြင့် Billy ကာဣန B.Sc psyche, RN (2015)
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်တကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတို့သည်ငယ်ရွယ်သော Emilio Loiacono MD (၂၀၁၅) တွင်အားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
အတိုင်ပင်ခံများသည် 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကပ်ဘေး'၊ စိတ်ပညာရှင် Seema Hingorrany & Yolande Pereira၊ ကလေးအထူးကု၊ Samir Dalwai (2015) ကိုတိုက်ထုတ်သည်။
Tinder နှငျ့ "ချိန်းတွေ့ပေါကလစ်" Vanity Fair (2015) ၏အရုဏ်
TEDX ကညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုဂရက်ဂိုရှမိုင်ဒရင် (2015) မှတင်ဆက်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ: စွဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်း။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျောင်းမှဗစ်တိုးရီးယားတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ Dr. Charlotte Loppie (2016)
သူနာပြုနေထိုင်သူများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်လိုသည်။ Lesley Mills က, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အတိုင်ပင်ခံသူနာပြု (2016)
ဘီဘီစီ: အွန်လိုင်း porn လွယ်ကူ access ကိုယောက်ျား၏ကျန်းမာရေး '' မထိခိုက်စေ '' သည် NHS ကုထုံးကပြောပါတယ်။ Psychosexual ကုထုံး Angela ဂရက်ဂိုရီ (2016)
ဆေးညွှန်းမရှိသော Viagra သည်ယနေ့လူမည်းလူငယ်များ၏အိပ်ခန်းများကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပါမောက္ခဒေးဗစ်ခဆမာဒီနှင့်မိုဟာမက် Mirza၊ ErectileDoctor.com MD တည်ထောင်သူ (၂၀၁၆)
"Porn စွဲသင့်ရဲ့လိင်ဘဝကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဤနေရာတွင်မယ့်နိုင်" ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအထူးကု Anand Patel က MD, လိင်ကုထုံး Janet ဒ, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာ Nicola Ray (2016)
Podcast - ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) ။ ကမ္ဘာ့ကျော်ကြားသောဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန် Dudley Danoff & Dr. Diana Wiley (2016) မှ
လုလင်တို့သည် Anand Patel က, MD (2016) က, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေဆငျးရဲဒုက်ခအဆိုပါအစစ်အမှန်အကြောင်းပြချက်
လွှဲ! အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းသင့်ရဲ့လိင်ဘဝကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ urology ပါမောက္ခဒေါက်တာဒေးဗစ် Samadi (2016) က
အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားသည်အင်တာနက် Porn (porn-သွေးဆောင် ED), အင်ဒရူး Doan, MD, Ph.D (2016) ဖြတ်နေကြတယ်
ဘယ်လို porn ၏ပြန့်ပွားယောက်ျားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးနေသည်။ Angela ဂရက်ဂိုရီ by Psychosexual ကုထုံး, Chandos ဆေးခန်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham U. အတွင်းရေးမှူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဗြိတိန်လူ့အဖွဲ့အစည်း (2016) အတွက် Lead
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကအများကြီးညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အသုံးပြုမှုဆက်စပ်။ Zoe ကို Hargreaves, NHS Psychosexual ကုထုံး (2016)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ Insidious သက်ရောက်မှု။ နှင်းဆီလိုင် MD (2016) က
အဆိုပါအနက်ရောင်နှင့်အပြာရုပ်ရှင်၏အဖြူ: ဘယ်လို porn စွဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆက်ဆံရေး။ Sandip Deshpande, MD (2016) က
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းအုပ်ကြီး porn အတွက်သင်ခန်းစာရယူပါ။ လိင်ပညာပေး Liz Walker က (2016)
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစွဲခြင်းနှင့်သင်လုပ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ခြောက်ချက်။ Diana Baldwin LCSW (၂၀၁၆) မှတင်ပြသည်။
ကြှနျုပျတို့ကိုသို့မဟုတ် Us သည်မကောင်းပါသည် Porn ကောင်းပါသလား? ဖိလိပ္ပုသည် Zimbardo ပါရဂူဘွဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ (2016)
ဘယ်လို Porn ကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်၏လိင်ဘဝပုံစံအပိုင်စီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာဘာဘရာဆောင်းရာသီ (2016) က
တစ်ဦးကတုန်လှုပ်ဖွယ်အသစ်များကိုတီဗွီရှိုးနောက်ဆုံးညဥ့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ဒုက္ခများလေမှအားပေးအားမြှောက်လူငယ်များမြင်သည်။ ဒေါက်တာ Vena Ramphal (2016)
သူတို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး Be နိုင်ပါစေသောကြောင့်, အဖြစ်များသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများဖြေရှင်းပုံ။ "orgasm တိုက်ဖျက်မည်" (2016) ၏ Eyal Matsliah စာရေးဆရာ
တောင်အာဖရိကကုသနှင့်လိင်ပညာပေးကြားဝင်မှုကြောင့်ညစ်ညမ်းစွဲ (2016) အားနောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌လေးနက်ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများခံစားနေရယနေ့လူငယ်ရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်ဟုပြော
ဘာစွဲ: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာပါ။ ဒေါ်ရသီ Hayden, LCSW (2016)
ဘယ်လို Porn ကိုဖျက်ဆီး Relationships, ဘာဘရာဆောင်းရာသီ, Ph.D ဘွဲ့ကို (2016)
porn တစ်ဦးကဆက်ဆံရေးကိုကူညီပါကားသတိပြုရန်နှင့်အတူရှေ့ဆက်မည်နိုင်သလား။ မန် Pasciucco LMFT, CST; Wendy Haggerty LMFT, CST (2016)
ဘယ်လိုကအင်တာနက် Porn လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်သင်ျခြိုပြုလုပ်ခြင်းသည်။ သင်ျခြိုသြစတြေးလျ, Alinda အသေးစား (2016) ၏လိင်ကုထုံးနှင့်တွဲဖက်
ဗီဒီယိုကို - ယောက်ျားလေးများအများအပြားလိုအပ်နေတဲ့ Viagra (2017) နဲ့ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးဘယ်လို Guyology တည်ထောင်သူ Melisa Holmes MD ဆွေးနွေးပွဲ
ဗီဒီယို: ဟော်မုန်းကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာ Kathryn Retzler porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) ဆြေးြေိံး
ဗီဒီယို: Brad Salzman, LCSW, CSAT (2017) က Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်
ခုနစျပါးကဲ့သို့ငယ်ရွယ်အိုင်းရစ်ကလေးများ porn ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ ဒေါက်တာ Fergal ရွန်နီ (2017)
ဤတွင် porn အိုငျးရစျဆက်ဆံရေးထိခိုက်မည်သို့ပါပဲ။ လိင်ကုထုံးထရီဇာ Bergin (2017)
နည်းပညာဟာဦးနှောက်ကိုဖျက်ဆီးသလဲ? (ဟာသဗဟိုပြပွဲ) ။ အလက်ဇန္ Katehakis, MFT, CSAT-S က, CST-S က (2017)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်အားမည်သို့သင်ကြားရမည်နည်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်ကုသသူများ Nuala Deering & Dr. June Clyne (2017)
ဗီဒီယိုကို - Porn Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်သင်ျခြိုသွေးဆောင်နိုင်ပါသလား? ရှင်ပေါလု Kattupalli MD (2016) က
'' Porn အများပြည်သူကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်ပါတယ် ': ကျွမ်းကျင်သူများက porn ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများသို့အစိုးရစုံစမ်းရေးအဘို့ကိုခေါ်ပါ။ လိင်ကုထုံးမာရိသညျ Hodson (2017)
သင်က Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို။ ဒေါက်တာ Ralph Esposito; အဲလ်ဆာ Orlandini Psy.D. (2017)
ဘယ်လို porn ကိုကြည့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒေါက်တာ Lubda Nadvi (2017)
TEDx ဆွေးနွေးချက်“ လိင်၊ (ပါမောက္ခ Warren Binford, 2017)
အွန်လိုင်း Porn: အမေရိကန်လိင်စွဲကုထုံးအတွက်အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာစွဲခရစ်ရှိမုနျကို (2017)
လူငယ်များသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ 'မြဲမြံ။ စိတ်သောကရောက်ခြင်း' ပြingနာများကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း (လေ့လာမှု ၂၀၁၇)
ကျွမ်းကျင်သူများကအရေးယူသတိပေးအဖြစ် porn စွဲ၏ '' ဒီရေလှိုင်းလုံး '' လာမယ့် '' ကိုဆုံးရှုံးမျိုးဆက် '' ကယ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ Psychosexual ကုထုံး ပေါ်လင်းဘရောင်း (2017)
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရပိုပြီးညစ်ညမ်းရှုမြင်သူကိုလူပျိုတို့, လေ့လာမှုကပြောပါတယ် (လိင်ကုထုံးပညာရှင်ဒေါက်တာမော်ဂန် Francis က 2017)
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဆေးပြားယခုဗြိတိန်အနှစ်တစ်ထောင်အဘို့အထိပ်ပါတီမူးယစ်ဆေးဖြစ်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ psychotherapist Raymond Francis က, (2017)
သငျသညျပြဿနာတွေက "တက်လာပြီ" ရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်သင်ကဝေးတစ်ဦးတည်းအနေဖြင့်ဖြစ်ကြပြီးအကူအညီများများထွက်ရှိပါတယ်။ ဒေါက်တာယောသပ်သည် Alukal (2018)
ကနျြးမာရေးဝန်ကြီးဌာနညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုသို့ပိုပြီးသုတေသနပြုလိုသည်။ လိင်ကုထုံး Jo Robertson က (2018)
အိပ်ခန်းထဲမှာ performance ကိစ္စများရုံတစ်ခုအဘိုးအိုရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ကုထုံး Aoife Drury (2018)
Evgeny Kulgavchuk တစ်ဦးရုရှား sexologist, စိတ်ရောဂါနှင့်ကုထုံး (2018) - porn တစ်ဦးက 'အမျိုးသားလူဦးရေအားသင်း' 'ဖြစ်ပါသည်
porn, ဆိုင်ကယ်စီးနင်း, အရက်နှင့်နေမကောင်း-ကျန်းမာရေးကြောင့်အထောက်အကူပြုဘယ်လောက်များနှင့်အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခြောက်လနည်းလမ်းများ: Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Urology ပါမောက္ခအီဒီအာမင် Herati (2018)
hard သိပ္ပံ: သင်၏စိုက်ထူအားကောင်းစေရန်မည်ကဲ့သို့။ နစ်ခ်နိုက်, MD (2018) က
Viagra ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်ဒါက Erectile အလုပ်မဖြစ်ဆက်ဆံဖို့9နည်းလမ်းများ။ ဒေါက်တာ Morgentaler, ဟားဗတ်မှာ Urology ၏လက်တွေ့ပါမောက္ခ (2018)
Porn & Sex စွဲ
quinpirole ၏သက်ရောက်မှုအောက်တွင်လိင်တူချင်းတွဲပြီးယောက်ျားအတွက်, ဒါပေမယ့်မရအမျိုးသမီးကြွက် (2011) တွင်တစ်ဦးအေးစက်လူမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် preference ကိုဖြစ်ပေါ်သည်။
အဘယ်သူသည်အဘယျသို့အဘယ်မှာရှိသည့်အခါ (နှင့်ဒီတစ်ခါလည်းတောင်မှအဘယ်ကြောင့်)? ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုကြေး၏အတွေ့အကြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, ဦးစားပေးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် (2012) ချိတ်ဆက်
DeltaFosB & sensitization ဆောင်းပါးများ
porn, Pseudoscience နှင့်ΔFosB
အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် Jay Giedd မှဆောင်းပါး - ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေး
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute မှဒေါက်တာဂျေး Giedd
porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် Mojo: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင်
porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
porn-သွေးဆောင် ED Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ
ပထမ ဦး စွာစာမျက်နှာ ၃ မျက်နှာရှိသည်။ ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 1, ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page2နှင့် ပြန်ဖွင့် Accounts ကိုစာမျက်နှာ 3.
အောက်ပါရှစ်စာမျက်နှာများ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဖော်ပြတိုတောင်းပုံပြင်များဆံ့: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
125 ရက်ပေါင်း (ED) - ရှည်လျားသော reboot ၏ဥပမာ
အသက် ၁၉ - ၂၈ ရက် (ED) - အလွန်တိုတောင်းသော reboot ၏ဥပမာ
ED, anorgamsia နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့် arousal မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲချိတ်ဆက်လေ့လာရေး။
အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှု - မည်သို့ပင်သင်၌ဖတ်စေခြင်းငှါအရာ၏ အချို့သောသတင်းစာပညာအကောင့်အသစ်များ၏, မျိုးစုံလေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုမှုအကြား link တစ်ခုထုတ်ဖေါ် နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ, ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများနှင့်လျှော့ချဦးနှောက်ကို Activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်။
ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူစတင်ကြပါစို့။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ လူငယ်ယောက်ျားများအားလိင်မှုကိစ္စကိုအကဲဖြတ်သည့်လေ့လာမှုများတွင်သမိုင်းဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုအဆင့်များနှင့်ဘေးဒဏ်အသစ်အဆန်း - လိင်စိတ်နည်းခြင်းများကိုဖော်ပြထားသည်။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)
14% ကနေ 35% အထိစဉ်အနိမ့်လိင်စိတ်များအတွက်နှုန်းထားများ (hypo-လိင်) အကွာအဝေးကဤမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း% 16 မှ 37% ကနေအထိ။ သည်အခြားလေ့လာမှုများယောက်ျား 25 ပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်အောက်တွင်စဉ်တချို့ကလေ့လာမှုများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ယောက်ျား 40 နှင့်အောက်တွင်ပါဝငျသညျ။
အခမဲ့ streaming porn (၂၀၀၆) မတိုင်မီကကဏ္2006များမှလေ့လာမှုများနှင့် meta-analysis သည်2နှစ်အောက်အမျိုးသားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်း 5-40% ရှိကြောင်းတသမတ်တည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့် ၁၀- နှစ်အတွင်းလူငယ် ED နှုန်း ၁၀၀၀% တိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ ၁၅ နှစ်။ ဒီနက္ခတ္တဗေဒမြင့်တက်မှုအတွက်အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့်လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းအဘယ်ပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲသွားသနည်း။
အောက်ကလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီစာမျက်နှာ 100 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။ ပထမဦးဆုံးအ5လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်:
1) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ယူအက်စ်ရေတပ်ဆရာဝန် ၇ ဦး ပါ ၀ င်သည်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်လူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာကြောင်းဖော်ပြသည့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက်သောဆေးမှတ်တမ်း ၃ ခုသည်ဆရာဝန်များကတင်ပြသည်။ အမျိုးသားသုံး ဦး အနက်နှစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြတ်တောက်မှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်။ တတိယလူသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
တခါကရှင်းပြသည်ယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်လာဘို့အကောင့်မှမလုံလောက်သောပေါ်လာကြောင်းရိုးရာအချက်များ, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျော့ကျနှင့် 40 အောက်မှာအမျိုးသားများတွင်ပူးပေါင်းလိင်စဉ်အတွင်းလိင်စိတ်လျော့။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို (1) မျိုးစုံ domains များအနေဖြင့်ဒေတာ, ဥပမာ, လက်တွေ့, ဇီဝဗေဒ (စွဲလမ်း / urology), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်), လူမှုဗေဒဆိုင်ရာစဉ်းစား; နှင့် (2) ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖြစ်ရပ်ဆန်း၏အနာဂတ်သုတေသနတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောဦးတည်ချက်အဆိုပြု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူလက်တွေ့အစီရင်ခံစာများတစ်စီးရီးတွေ့ရမယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်ပြောင်းလဲညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အခြေခံတဲ့ဖြစ်နိုင်သော etiology အဖြစ်စူးစမ်းနေကြသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုလည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ (အဆမဲ့အသစ်အဆန်းပိုမိုလွန်ကဲပစ္စည်း, ဗွီဒီယို format နဲ့, etc ရန်လွယ်ကူတင်းမာမှုများအတွက်အလားအလာ) အလွယ်တကူအစစ်အမှန်မှပြောင်းလဲမသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရှုထောင့်မှလိင်စိတ်နိုးထအခြေအနေဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်ဖြစ်မည်အကြောင်းသက်သေအထောက်အထားစဉ်းစား တပ်မက်လိုချင်သောအဖက်များနှင့်အတူလိင်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အ arousal ငြင်းပယ်တွေ့ဆုံအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်မပြုစေခြင်းငှါဤကဲ့သို့သောကြောင်း -life မိတ်ဖက်။ လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရပ်စဲဘာသာရပ်များတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားပစ်ရှိသည်သောနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ကျယ်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု reverse မှတစ်ခါတစ်ရံတွင်လုံလောက်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
2) အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2016) - လက်ရှိဥက္ကiat္ဌဖြစ်သောပြင်သစ်စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် Sexology ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြားကပြန်နှင့်ထွက်သည့်စိတ္တဇဆိုင်းနေစဉ်, ဒါကြောင့်သူကအများအားဖြင့်ရည်ညွှန်းရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့် porn-သွေးဆောင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် anorgasmia) ။ အဆိုပါစက္ကူ 35 erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် anorgasmia ဖွံ့ဖြိုးပြီးသူအမျိုးသားများနှင့်သူတို့ကိုကူညီအားမိမိကုထုံးချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူမိမိအလက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုကိုဗဟိုပြု။ စာရေးသူကသူ့လူနာအများစုအများအပြား porn စွဲခံနေရအတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖော်ပြသည်။ ပြဿနာတွေ (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနာတာရှည် ED ဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး, ဒါကြောင့် ED တစ်အကြောင်းမရှိအဖြစ်ပေးထားသောဘယ်တော့မှကြောင်းသတိရ) ၏အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့စိတ္တဇအချက်များ။ အဆိုပါ 19 ယောက်ျား၏ 35 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုမြင်တော်မူ၏။ အခြားလူတို့သညျကုသမှုထဲကကျဆင်းသွားသို့မဟုတ်နေဆဲ recover ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဖြစ်စေ ကောက်နှုတ်ချက်:
မိတ်ဆက်ခြင်း: ကျယ်ပြန့်ကျင့်သုံးသည်သူ၏ခါတိုင်းလိုပုံစံမီတာအတွက်အန္တရာယ်ပင်အထောက်အကူယေဘုယျအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲယနေ့ဆက်စပ်ယင်း၏အလွန်အကျွံနှင့် Pre-ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပုံစံ, လွန်းမကြာခဏကသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏လက်တွေ့အကဲဖြတ်အတွက်သတိမမူဖြစ်ပါတယ်အတွက် asturbation.
ရလဒ်များ: ကုသမှုပြီးနောက်, ဤလူနာတွေအတွက်ကနဦးရလဒ်များကို, သူတို့၏တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အလေ့အထများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသောစွဲလမ်းမှုများကို“ နားမလည်” ရန်အားပေးမှုနှင့်အလားအလာရှိသည်။ ရောဂါ ၃၅ ယောက်အနက် ၁၉ ဦး တွင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအလုပ်မဖြစ် regressed နှင့်ဤလူနာကျေနပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
နိဂုံး: စှဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလေ့ဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းအပေါ်တစ်ဦးမှီခိုအားဖြင့်လိုက်ပါသွား, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ် coital anejaculation အချို့အမျိုးအစားများ၏ etiology အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှမြင်ကြပြီ။ ဒါဟာစနစ်တကျမဟုတ်ဘဲထိုအအလုပ်မဖြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်အလေ့အထ-ခြိုးဖောကျ deconditioning နည်းစနစ်များပါဝင်သည်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်ထက်ကဤအလေ့အထ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။
3) လုလင်တို့သည် (2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့် - porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (အနိမ့်လိင်စိတ်, fetishes, anorgasmia) နဲ့လူတပေါ်မှာဤစက္ကူအစီရင်ခံစာများတွင်4ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေ 6-ရက်သတ္တပတ် abstinence များအတွက်လို့ခေါ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ 8 လကြာပြီးတဲ့နောက်လူကိုတိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အောင်မြင်သောလိင်နှင့်အော်ဂဇင်နှင့် "ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ခံစားသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူ၏ပထမဦးဆုံးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ် Chronicles ဖြစ်ပါတယ်။ စက္ကူကနေကောက်နှုတ်ချက်:
masturbatory အလေ့အကျင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါ "ဟုသူမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းကြည့်နေစဉ်လွန်ခဲ့သည့်အတွက်သူပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့်လျှင်မြန်စွာ masturbating ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါညစ်ညမ်းမူလကအဓိကအား zoophilia, ကျွန်ခံ, လွှမ်းမိုးမှုကို, sadism နှင့် masochism ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်သူကနောက်ဆုံးမှာသည်ဤပစ္စည်းများမှ habituated နှင့်လိင်လိင်, orgies နှင့်အကြမ်းဖက်လိင်အပါအဝင်ပိုပြီးအမာခံညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများ, လိုအပ်တယ်။ သူကအကြမ်းမဖက်လိင်အပြုအမူများနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအပေါ်တရားမဝင်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုဝယ်ဖို့အသုံးပြုနှငျ့အမြိုးသမီးနှင့်အတူလိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားမိမိစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသူတို့မြင်ကွင်းများမြင်။ သူတဖြည်းဖြည်းမိမိအလိုဆန္ဒနှင့်အ fantasize ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရနှင့်သူ၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေလျော့သွားသည်။ "
လိင်ကုထုံးနှင့်အတူအပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများနှင့် တွဲဖက်. မှာတော့လူနာဗီဒီယိုများ, သတင်းစာတွေ, စာအုပ်တွေနဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပါအဝင်လိင်ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းမှမဆိုထိတွေ့မှု, ရှောင်ရှားရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
8 လအတွင်းပြီးနောက်လူနာအောင်မြင်သောအော်ဂဇင်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ကြုံနေရအစီရင်ခံတင်ပြ. သူမိန်းမနှင့်သူ၏ဆကျဆံရေးသက်တမ်းတိုး, သူတို့တဖြည်းဖြည်းကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ခံစားနိုင်ခဲ့သည်။
4) ကရေတိုရေရှည် psychosexual မော်ဒယ်အတွင်းနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လိုခက်ခဲပါသလဲ တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှုနှိုင်းယှဉ် (2017) - နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (anorgasmia) အတွက်အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသပုံနှစ်ခု "ပေါင်းစပ်မှုကိစ္စ" ပေါ်တွင်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ။ "လူနာ B ကို" ဟုအဆိုပါကုထုံးကကုသအတော်ကြာလုလင်တို့သည်ကိုယ်စားပြုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာစက္ကူလူနာ B ကိုရဲ့ "ကိုမကြာခဏကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့", "porn အသုံးပြုမှုကိုခက်ခဲပစ္စည်းသို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့သော" သော။ ဤသို့ဖော်ပြသည် အဆိုပါစက္ကူ porn-related နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆန်း, နှင့်မြင့်တက်မဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ ရေးသားသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအပေါ်ပိုပြီးသုတေသနပြုရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ လူနာ B ကိုရဲ့နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိညစ်ညမ်း၏ 10 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အနာကိုငြိမ်းစေခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားမှု Croydon တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ, လန်ဒန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွင်းငါ၏အမှုကနေယူပေါင်းစပ်အမှုပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ (အဆုံးစွန်သောအမှုနှင့်အတူလူနာ B), ကတင်ဆက်မှုအလားတူရောဂါနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထှထှေကေုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းခဲ့ကြသူငယ်ရွယ်ယောက်ျားတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုထင်ဟပ်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ လူနာ B ကို သူထိုးဖောက်မှုမှတဆင့် ejaculate နိုင်ခြင်းကြောင့်တင်ဆက်သူတစ်ဦး 19 နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သူ 13 ခဲ့သောအခါသူမှန်မှန်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုများကိုမှတဆင့်မိမိပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သူ၏အဆွေခင်ပွန်းသူ့ကိုစေလွှတ်သောလင့်များမှတဆင့်ဖြစ်စေညစ်ညမ်းဆိုဒ်များအားဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူက image ကိုသူ့ဖုန်းကိုရှာဖွေနေစဉ်ညတိုင်း masturbating စတင် ... သူအိပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ masturbate မပြုခဲ့ပါ။ ခက်ခဲပစ္စည်း (တရားမဝင်ဘာမျှ) သို့, (Hudson-Allez, 2010 ကိုကြည့်ပါ) ကိုမကြာခဏကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့သူကို အသုံးပြု. ခဲ့ညစ်ညမ်း, ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့ ...
လူနာ B ကို 12 ၏အသက်အရွယ်ကနေညစ်ညမ်းနေတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာပုံရိပ်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူကို အသုံးပြု. ခဲ့ညစ်ညမ်း 15 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်ကျွန်ခံခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကသူမရှိတော့ masturbate မှညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်မယ်လို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ဤသည်ညဥ့်အခါတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတဲ့အခန်း၌မိမိဖုန်းကိုထွက်ခွာဆိုလိုသညျ။ ကျနော်တို့သူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက် masturbate မယ်လို့သဘောတူညီခဲ့ ... ။
လူနာ B ကို ပဉ်စမ session တစ်ခုအားဖြင့်ထိုးဖောက်မှုမှတဆင့်အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့သည်; အဆိုပါအစည်းအဝေးများတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကနေခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 ရက်သတ္တပတ်မှ session ကိုငါးခုညီမျှခြင်းဒါ Croydon တက္ကသိုလ်ဆေးရုံများတွင်နှစ်ပတ်တကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ သူပျော်ရွှင်အလွန်စိတ်သက်သာရာဖြစ်ခဲ့သည်။ လူနာ B ကိုအတူသုံးလနောက်ဆက်တွဲမှာတော့အမှုအရာနေဆဲကောင်းစွာသွားခဲ့ကြသည်။
လူနာ B ကို အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု (NHS) အတွင်းသီးခြားကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးနှင့်တကယ်တော့ယေဘုယျအားဖြင့်လူပျိုတို့ psychosexual ကုထုံးကိုရယူသုံး, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ, ပြောင်းလဲမှု၏နှိုးဆော်သူ့ဟာသူအတွက်ပြော၏။
ဤဆောင်းပါးသည်ထို့ကြောင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတိုင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတိုင်နှင့်ဆက်စပ်မူကြောင်းကိုယခင်သုတေသနထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် DE နဲ့အတူလက်တွဲပြီး psychosexual ကုသ၏အောင်မြင်မှုများခဲအကြီးအကျယ်သွဇာအောကျရှိနေဆဲဆက်ဆံဖို့ခက်ခဲတဲ့ရောဂါအဖြစ် DE များ၏မြင်ကွင်းကိုခွင့်ပြုခဲ့သောပညာရပ်ဆိုင်ရာစာပေ, တှငျမှတျတမျးတငျထားသဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအားဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့သုတေသနနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါ desensitisation အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။
5) အခွအေနေ Psychogenic Anejaculation: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (2014) - အသေးစိတ် porn-သွေးဆောင် anejaculation တစ်ဦးအမှုထုတ်ဖေါ်။ သူ ejaculate နိုင်ခဲ့သည်ဘယ်မှာ - ကြိုတင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ခင်ပွန်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကညစ်ညမ်းစေရန်မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့သည်။ သူလည်းညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းထက်လျော့နည်း arousal အဖြစ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်၏သော့အပိုင်းအစသည်သူ၏ anejaculation အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ပျက်ကွက် "Re-လေ့ကျင့်ရေးက" နှင့် psychotherapy ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားကြားဝင်ပျက်ကွက်သည့်အခါကုသ porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်မှာပြည့်စုံပိတ်ပင်မှုအကြံပြုသည်။ နောက်ဆုံးတော့ဒီတားမြစ်ချက်သည်သူ၏အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါတနာတစ်နှင့်အတူအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
တစ်ဦးကလိင်ကွဲတိမ်းညွတ်နဲ့ 33 နှစ်အရွယ်လက်ထပ်အထီးတစ်အလယ်တန်းလူမှုစီးပွားမြို့ပြနောက်ခံကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကမျှမလွန်ကျူးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မကြာခဏ masturbated ။ လိင်နှင့်လိင်အကြောင်းကိုသိပ္ပံအတတ်တော်လုံလောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအလက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးနောက်မစ္စတာတစ်ဦးပိုင်းတွင်ပုံမှန်အဖြစ်သူ၏လိင်စိတ်ဖော်ပြထားပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာကသူ့ ejaculatory အခက်အခဲများမှအလယ်တန်းလျှော့ချ။ 30-45 မိနစ်ထိုးလှုပ်ရှားမှုများရှိနေသော်လည်းသူနဲ့သူ့ဇနီးနှင့်အတူထိုးဖောက်မှုလိင်စဉ်အတွင်းအော်ဂဇင် ejaculate သို့မဟုတ်အောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့ဘူး။
မစ္စတာတစ်ဦးရဲ့ဆေး rationalized ကြသည် ဟူ. ၎င်း, clomipramine နှင့် bupropion ရပ်စဲခံခဲ့ရနှင့် sertraline တစ်နေ့လျှင် 150 မီလီဂရမ်တစ်ထိုးမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ထိုစုံတွဲနှင့်အတူကုထုံးအစည်းအဝေးများ, ကနဦးလအနည်းငယ်အဘို့ထိုသူတို့နှစ်ပတ်တနောက်ပိုင်းတွင်လစဉ်မှလှပတဲ့ခဲ့ပြီးသောအောက်ပါအပတ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်မဟုတ်ဘဲသုတ်ရည်လွှတ်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအပေါ်အာရုံအပါအဝင်တိကျတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ပရိသတ်လျှော့ချကူညီရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပြဿနာများသည်ဤဆောင်ရွက်ချက်ရှိနေသော်လည်းဆက်ရှိနေကတည်းကအထူးကြပ်မတ်လိင်ကုထုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့သူတို့ (သူအထက်ပါပျက်ကွက်ကြားဝင်စဉ်အတွင်း porn မှ masturbate ဆက်လက်ဆိုလိုတာက) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်မှာပြည့်စုံပိတ်ပင်မှုထူထောင်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမဆိုပုံစံပေါ်တွင်တစ်ဦးကတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုအကြံပြုခဲ့သည်။ တိုးတက်ရေးပါတီ Sensation အာရုံစိုက်လေ့ကျင့်ခန်း (အစပိုင်းတွင် Non-လိင်အင်္ဂါနှင့်အနောက်ပိုင်းမှာလိင်အင်္ဂါ) အစပျိုးခဲ့ကြသည်။ မစ္စတာတစ်ဦးကသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်းကြုံတွေ့သောအရာမှနှိုင်းယှဉ်ပါကထိုးဖောက်မှုလိင်စဉ်အတွင်းဆွ၏တူညီသောဒီဂရီတွေ့ကြုံခံစားရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်ပိတ်ပင်မှုပြဌာန်းခဲ့သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးလာဆန္ဒကဖော်ပြခဲ့သည်။
အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ငွေပမာဏပြီးနောက်အောင်မြင်မှု porn ခဲမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်ပိတ်ပင်မှု:
ဤအတောအတွင်းမစ္စတာ A နှင့်သူ၏ဇနီး Assistant မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာနည်းပညာ (အေအာရ်တီ) နဲ့ရှေ့ဆက်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့် Intrauterine သုက်နှစ်ခုသံသရာခံယူ။ တစ်ဦးအလေ့အကျင့် session တစ်ခုစဉ်အတွင်းမစ္စတာတစ်ဦးကသူသည်စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကတစ်အများစုစဉ်အတွင်းကျေနပ်ဖွယ် ejaculate နိုင်ခဲ့သည့်အောက်ဖော်ပြပါ, ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ejaculated.
6) Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၇) - အသစ်စက်စက်ပွနျလညျရှာဖှတှေ့နှင့်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချ။ ဗီဒီယိုက porn အလုပ်သမားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာတော့လုလင် 50% နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာသို့မဟုတ်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး နှင့် porn (ပျှမ်းမျှအသက် 29 ခဲ့သည်) ။ အဆိုပါတုန်လှုပ်သုတေသီများအမျိုးသား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ,
“ ဘာသာရပ်များနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းကအချို့သောသူများအတွက်aerotica နှင့်ထိတွေ့မှုမြင့်မားခြင်းက vanilla sex erotica နှင့်တုန့်ပြန်မှုအသစ်များနှင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရန်တုန့်ပြန်မှုအားနိမ့်ကျစေပြီးအချို့ကိစ္စရပ်များတွင်နှိုးဆွရန်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားများကိုအထူးလိုအပ်သည်။။ "
7) ခေါ်ဆောင်သွားသည့် latency ကာလအတွင်းမှာတော့ Disruption နှင့်လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှု, အွန်လိုင်းလိင်အပြုအမူများနှင့်လူငယ်လူကြီး (2009) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကြားဆက်ဆံရေး Exploring - "အောင်းနေချိန်ကာလ" (အသက်အရွယ်မရွေး 6-12) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စဉ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု - လေ့လာလက်ရှိ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (SEM လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း) အကြားဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို၏ပျမ်းမျှအသက် 22 ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ porn အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေစဉ်, အောင်းနေချိန်ကာလအတွင်း porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (အသက်အရွယ်မရွေး 6-12) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူတစ်ပင်အားကောင်းဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
တွေ့ရှိချက်ကြောင်းအကြံပြု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းလမ်းဖြင့်အောင်းနေချိန်ခေါ်ဆောင်သွားနှောင့်အယှက် (SEM) နှင့် / သို့မဟုတ်ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအရွယ်ရောက်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပွငျရလဒ်များကိုသရုပ်ပြ ကြောင်းအောင်းနေချိန် SEM ထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်တဲ့သိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အောင်းနေချိန် SEM ထိတွေ့ခြင်းမှထိတွေ့မှု SEM ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမယ်လို့တွေးဆ။ လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ထောက်ခံနှင့်အောင်းနေချိန် SEM ထိတွေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ SEM အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်အောင်းနေချိန်ကာလအတွင်း SEM ထိတွေ့သူတစ်ဦးချင်းစီ, လူကြီးသို့ဤအပြုအမူများဆက်လက်စေခြင်းငှါအကြံပြု။ လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်လည်းညွှန်ပြ အောင်းနေချိန် SEM ထိတွေ့အရွယ်ရောက်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်သိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့သည်.
8) နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဒီ fMRI လေ့လာမှုမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ာင်းထင်ဟပ်ပေးသောညစ်ညမ်းစွဲအတွက်ာင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအစကြောင့်ညစ်ညမ်းစွဲကပိုက "" လို၏လက်ခံခဲ့သည်စွဲမော်ဒယ် fit ကိုတွေ့ပေမယ့် မဟုတ် ပိုပြီး "က" like နှိပ်။ အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူအခက်အခဲရရှိစိုက်ထူ / arousal ခဲ့: အဆိုပါသုတေသီများလည်းဘာသာရပ်များ၏ 60% (25 ပျှမ်းမျှအသက်) ထိုအစီရင်ခံတင်ပြ porn ကို အသုံးပြု. ၏ရလဒ်အဖြစ်သို့သော်လည်း, porn နှင့်အတူစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး။ လေ့လာမှုကနေ ( "CSB" compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်):
CSB ဘာသာရပ်များကအစီရင်ခံသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများအားအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ... [သူတို့] သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာနှင့်မပတ်သက်ပါ။) "
“ ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များသည်လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒပြင်းပြမှုပိုများသည် (သို့) ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြလိုသောဆန္ဒများရှိတတ်သည်။ CSB ဘာသာရပ်များလည်းရှိခဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အတူရငျးနှီးဆက်ဆံရေးသော်လည်းမအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့် erectile အခက်အခဲများပိုမိုချို့ယွင်း တိုးမြှင့်လိုသောဆန္ဒများရမှတ်များသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခြင်းနှင့်တိတိကျကျဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲယေဘုယျအားဖြင့်မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒကိုမဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ”
9) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု (2016) - တစ်ဦးဦးဆောင်သုတေသနပြုတက္ကသိုလ်ကနေဒီဘယ်လ်ဂျီယံလေ့လာမှုပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့လျှော့ erectile function ကိုနှင့်လျှော့ချခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးပြဿနာ porn အသုံးပြုသူများသည် သာ. ကြီးမြတ်မတရားသောခံစားခဲ့ရသညျ။ အဆိုပါလေ့လာမှုက "လူတို့သညျရှုမွငျကွ porn ၏ 49% အဖြစ်တင်းမာမှုအစီရင်ခံရန်ပုံပေါ်ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဟုတ်ခဲ့။ "(ကိုကြည့်ပါ လေ့လာမှုတွေ ) porn အသုံးပြုမှု porn နှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့လေ့ / desensitization သတင်းပို့ကောက်နုတ်ချက်:
"ဒီလေ့လာမှုကတိုက်ရိုက် OSAs အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်များကြောင်းညွှန်ပြ ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း erectile function ကိုပြဿနာ OSAs (အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ) နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ ဤ ရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက် arousal ၏မြင့်မားသောအဆင့်သတင်းပို့ယခင်လေ့လာမှုများအဲဒီချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် (Bancroft & Vukadinovic, 2004; Laier et al, 2013; ။ Muise et al, 2013) ။ "
ထို့အပြင်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့အသစ်သို့မဟုတ်စိတ်ပျက်စရာ porn အမျိုးအစားများဖြစ်နိုင်တင်းမာမှုနှင့် ပတ်သက်. porn အသုံးပြုသူများကမေးတယ်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုရှိသည်။ ကတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုမှန်းဆ?
"အနည်းဆုံးအားတစ်ခါတစ်ရံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာဖွေဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့သို့မဟုတ်မခံခဲ့ဘူးကြောင်းကို OSAs တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖော်ပြခဲ့တဲ့လေးဆယ်ကိုးရာခိုင်နှုန်း, နှင့် ၆၁.၇% ကအနည်းဆုံးတစ်ခါတစ်ရံ OSAs သည်အရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်အပြစ်ရှိသည်ဟူသောခံစားချက်များနှင့်ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ”
မှတ်ချက် - ဒါက ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု တိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ porn အသုံးပြုခြင်းနှင့် erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီဟုဆိုကာနှစ်ဦးကအခြားအလေ့လာမှုများအတူတကွ porn-သွေးဆောင် ED debunk တစ်ခုမအောင်မြင်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများ cobbled ။ နှစ်ဦးစလုံးဟာသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေအတွက်ပြစ်တင်ဝေဖန်ခံခဲ့ရ: စက္ကူ #1 အနေနဲ့စစ်မှန်လေ့လာမှုမဟုတ်ခဲ့, နှင့်ခဲ့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရှုံ့; စက္ကူ #2 အမှန်တကယ်ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ porn- သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုထောကျပံ့ပေး။ ထို့အပြင်စက္ကူ ၂ သည်“ အတိုချုပ်ဆက်သွယ်မှု” သာဖြစ်သည် စာရေးသူတစ်ဦး sexology conference မှာအစီရင်ခံတင်ပြပေးသောအရေးကြီးသောဒေတာသတင်းပို့ဘူး.
10) မြီးကောင်ပေါက်နဲ့ web porn: လိင်၏ခေတ်သစ်တစ်ခု (2015) - ဤအီတလီလေ့လာမှု urology ပါမောက္ခကပူးတွဲရေးသားအထက်တန်းကျောင်းအပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ် Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ် Non-စားသုံးသူအတွက် 16% (နှင့်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းစားသုံးသူများအတွက် 0%) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသညျ့အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတစ်ပါတ်အစီရင်ခံစာတစ်ကြိမ်ထက် porn ကိုပိုလောင်သောသူတို့၏အမျိုးအကြောင်း 6% ။ လေ့လာမှုမှ:
11) 115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2015): Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ နာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းစသည့် hypersexuality မမှန်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသားများ (ပျမ်းမျှအသက် ၄၁.၅) ကိုလေ့လာခြင်း။ အမျိုးသား ၂၇ ယောက်ကို“ ရှောင်လွှဲနိုင်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုဖြင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ပတ်လျှင် ၇ နာရီအထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ နာတာရှည် porn မှ masturbated သူယောက်ျား၏ 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (porn-သွေးဆောင် ED ရန်ရှေ့ပြေး) နဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုသတင်းပို့.
ကျန်ရှိနေသေးသောအမျိုးသားများ၏ ၃၈% သည်မည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသနည်း။ ဒီလေ့လာမှုကမပြောနိုင်ပါဘူး၊ ပြီးတော့စာရေးသူတွေကအသေးစိတ်တောင်းခံရန်ထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုမှုများကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အဓိကရွေးချယ်မှုနှစ်ခုမှာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးသားများသည်၎င်းတို့၏ erectile လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းမခံခဲ့ရကြောင်းသတိပြုသင့်သည် ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ။ ဤအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု porn နှင့်မဖက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ masturbating ပါဝင်ပတ်သက်လျှင်သူတို့ porn-သွေးဆောင် ED ခဲ့သဘောပေါက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။ (သာသူမ၏သိအကြောင်းပြချက်များအတွက် Prause porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏တည်ရှိမှု debunking အဖြစ်ဤစာတမ်းတွင်ကိုးကား။ )
12) ယောက်ျားရဲ့လိင်ဘဝနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှပြန်လုပ် Exposure ။ တစ်ဦးကနယူးပြဿနာ? (2015) - ကောက်နှုတ်ချက်:
စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက်အပြုအမူတွေ, ယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအသဘောထားတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယောက်ျားအပေါ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးသက်ရောက်မှုများယူသင့်ပါတယ်။ ရေရှည်ညစ်ညမ်း၌သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးအော်ဂဇင်ရောက်ရှိဖို့အထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကိုဖန်တီးရန်ပုံရသည်။ porn ကြည့်နေစဉ် masturbating သည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၏အများဆုံးသုံးစွဲတဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးကမကြာမီအနေနဲ့အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်အမြင်အာရုံဆွလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သဘာဝကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစုံ (Doidge, 2007) rewiring ၌သူ၏ဦးနှောက်ပါဝင်နေသည်။
ထိုကဲ့သို့သော porn ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အော်ဂဇင်ရောက်ရှိအတွက်အခက်အခဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသို့အလှည့် ejaculate နိုင်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များဘို့လိုအပ်ကြောင်းပါဝင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအဖြစ် porn စားသုံးမှုအတော်များများကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာတွေ။ ဤရွေ့ကားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလအတွင်းသို့မဟုတ်နှစ်ကြာသွားနိုင်ပြီး၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုမဖြစ်ပေမယ့်ကစိတ်ပိုင်းဖြစ်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကိုယ်ထင်ရှားလိမ့်မည်။ သောကြောင့်အရှက်, အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ထုတ်ပေးသောဤစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ၏, ယောက်ျားအများကြီးအထူးကုကြုံတွေ့ရဖို့ငြင်းဆန်
ညစ်ညမ်းလူသားထု၏သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်လူ့ရဲ့လိင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြသောအခြားအချက်များတွေ့ရှိခဲ့ရသည်မပါဘဲအပျော်အပါးရရှိရန်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အစားထိုးပေးထားပါတယ်။ ဦးနှောက်ကိုညီမျှခြင်းကနေ "အခြားတကယျ့ပုဂ်ဂိုလျ" ချန်လှပ်ထားတဲ့လိင်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးရေရှည်မှာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်တစ်ဦးထံတော်၌တခုစိုက်ထူရယူအတွက်အခက်အခဲများမှယောက်ျားကပိုကျရောက်နေတဲ့စေသည်။
13) ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှု (2016) - များစွာသောအခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူအမျှတိုက်ပိတ် porn အသုံးပြုသူများကဆင်းရဲတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသတင်းပို့ပါ။ အဆိုပါအလုပ်သမား ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု Effect စကေး (PCES), လေ့လာမှုပိုမိုမြင့်မား porn အသုံးပြုမှုဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်တစ်ဦး "ပိုဆိုးလိင်ဘဝ" နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "လိင်ဘဝက" မေးခွန်းတွေနဲ့ porn အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းအပေါ် PCES "အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ" အကြားဆက်စပ်မှုဖော်ပြတစ်ခုကောက်နုတ်ချက်:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းဖြတ်ပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု Dimension PCES အဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ကြ၏ သို့သော် t ကိုဤနေရာတွင်အမြင့်ကြိမ်နှုန်း Porn အသုံးပြုသူများအနိမျ့ကြိမ်နှုန်း Porn အသုံးပြုသူများထက် သာ. ကြီးမြတ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံရှိရာလိင်အသက်ကို subscale အပေါ်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏။
14) ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016) -“ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ” (CSB) သည်ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းစွဲသူများဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ တစ်ပတ်ကို ၂၉ မိနစ်ခန့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာက CSB ဘာသာရပ် ၂၀ မှ ၃ ခုသည်အင်တာဗျူးသူများကို“ အော်ဂဇင် - စိုက်ထူသောရောဂါ” ခံစားခဲ့ရကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
15) ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014) - ကိုလောင် porn ၏ပမာဏနှင့်အတူ correlating3သိသိသာသာစွဲလမ်း-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိရသည့်တစ်ဦးကမက်စ် Planck လေ့လာမှု။ ဒါဟာအစကိုပိုမိုညစ်ညမ်း vanilla porn မှထိတွေ့မှု (.530 ဒုတိယ) ရှင်းလင်းတုံ့ပြန်အတွက်လျော့နည်းဆုလာဘ် circuit ကိုလှုပ်ရှားမှုကိုလောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး 2014 ဆောင်းပါးခဲရေးသားသူအတွက် ဆီမှKühnကပြောပါတယ်:
"ကျနော်တို့ကမြင့်မားတဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူဘာသာရပ်များဆုလာဘ်၏တူညီသောငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိရန်တိုးပွားလာဆွလိုအပ်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ အဲဒီညစ်ညမ်းပုံမှန်စားသုံးမှုထက်ပိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသင်တို့၏အကျိုးစနစ်ကထွက်ကျီကိုဆိုလိုနိုင်ဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာမိမိတို့အကျိုးကိုစနစ်များကြီးထွားလာဆွလိုအပျကွောငျးဿုံအဆိုပါယူဆချက် fit မယ်လို့။ "
Kuhn & Gallinat မှစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှဤလေ့လာမှု၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - Hypersexuality ၏ Neurobiological အခြေခံ (2016).
ပါဝင်သူများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲကြောင်းနာရီများများပြောခဲ့သည်၊ လိင်ပုံရိပ်များကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်လက်ဝဲ Putamen များတွင် BOLD တုံ့ပြန်မှုနည်းလေလေဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ရှုခြင်း၌အချိန်ပိုများများသည် striatum ရှိမီးခိုးရောင်အမှုန်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး၊ မှန်ကန်စွာ ventral putamen သို့ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံအသံအတိုးအကျယ်လိုငွေပြမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ desensitization ပြီးနောက်သည်းခံစိတ်၏ရလဒ်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါမှနျး။ "
16) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် - ဤ EEG လေ့လာမှုမွှမ်းတင်ခဲ့ပါသည် မီဒီယာ သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် ဆန့်ကျင် porn စွဲ၏တည်ရှိမှု။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှုများနှင့်အညီ, ဒီ EEG လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည် ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်လျော့နည်းဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်း porn ပိုမို cue-reactivity ကို။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် porn ပိုဦးနှောက်ကို Activation နှင့်မတရားသောနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက် porn မှ masturbate လိမ့်မယ်။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်လေ့လာမှုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသုံးစွဲသူများမှာ“ မြင့်မားသောလိင်စိတ်နိုးထမှု” မျှသာဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက် (ပူးပေါင်းလိင်အဘို့မိမိတို့အလိုဆန္ဒစွဲလက္ခဏာစပ်လျဉ်းကျဆင်းနေခဲ့သည်) ။ ငါး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများအမှန်တရားဖော်ထုတ်: 1, 2, 3, 4, 5။ ထို့အပြင်ကြည့်ရှု ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။
17) ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅) - နောက်ထပ်နီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှု။ ဤအချိန်မှ 2013 ဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ် အထက်ပါလေ့လာမှု တစ်ကယ့်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်များ: ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်“ ညစ်ညမ်းသောဆေးစွဲသူများ” သည် vanilla porn ဓါတ်ပုံများကိုတစ်စက္ကန့်ထိအနည်းငယ်သာတုံ့ပြန်မှုနည်းသည်။ ဦးဆောင်ရေးသားသူ, နီကိုးလ် Prause ဤရလဒ်များကို porn စွဲ (caims ဆန့်ကျင် debunk ပြောဆိုထားသည် အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုများ porn စွဲမော်ဒယ်တွင်မှအမှား).
သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူperfectlyုံကိုက်ညီ Kühn & Gallinat (2014), vanilla ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်ပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့က (လေ့သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းခြောက်ခုကဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများတွင်အကျင့်စရိုက်လက္ခဏာများ / အလေ့အကျင့်များတွေ့ရှိကြောင်းသဘောတူသည် 1, 2, 3, 4. 5, 6. (ဤတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု) ။ စကားမစပ်, အခြား EEG လေ့လာမှု အမျိုးသမီးတွေအတွက် သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ နည်းသော ညစ်ညမ်းဖို့ဦးနှောက်ကို Activation ။
18) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဘယ်လိုအတော်များများအခန်းကဏ္ဍ: တာရယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများနှင့်အတူများထဲတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လျော့နည်းသွား? (2015) - နှင့်အတူ related ခံခဲ့ရပါတယ် porn မှ Masturbating လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အနိမ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရငျးနှီးလျော့နည်းသွားသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
မကြာခဏ masturbated သူကိုလူတို့တွင်, 70% အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးက multivariate အကဲဖြတ်ကြောင်းပြသ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်း, မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အနိမ့်ကြားဆက်ဆံရေးနွေးထွေးမှုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူစုံတွဲလူတို့တွင်မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသတင်းပို့၏အလေးသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
လူတို့တွင် [2011 အတွက်] အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောသူကို [အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့နည်းသွား] 26.1% သူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ။ ဖြည့်စွက်ကာ, ယောက်ျား၏ 26.7% ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအနုတ်လက္ခဏာကသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းလိင်ထိခိုက်ကြောင်းအစီရင်ခံ နှင့် 21.1% ညစ်ညမ်းသုံးပြီးရပ်တန့်ဖို့ကြိုးပမ်းကြမှအခိုင်အမာ.
19) နော်ဝေလိင်ကွဲစုံတွဲ (2009) ၏ကျပန်းနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း - Porn အသုံးပြုမှုအမျိုးသမီးအတွက်ယောက်ျားနဲ့အနုတ်လက္ခဏာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြင်တွင်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ porn ကိုအသုံးမပြုခဲ့သူစုံတွဲများအဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုကနေအနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
တစ်ဦးတည်းသာမိတ်ဖက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောဘယ်မှာစုံတွဲများအတွက်ကျနော်တို့ arousal နှင့်ဆက်စပ်သောပိုပြီးပြဿနာများ (အထီး) နှင့်အနုတ်လက္ခဏာ (အမျိုးသမီး) Self-အမြင်တွေ့ရှိခဲ့.
ဘယ်မှာသူတို့အားစုံတွဲများအတွက် တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသော တစ်ဦးအလိုလိုခေါ်ဆောင်သွားရာသီဥတုရှိ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲဒီစုံတွဲကပိုအလုပ်မဖြစ်ရှိသည်ဖို့သလိုပဲ.
ညစ်ညမ်းမသုံးခဲ့ဘူးသူစုံတွဲများ ..။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ၏သီအိုရီ ဆက်စပ်. ပိုမိုရိုးရာထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သူတို့ကမည်သည့်အလုပ်မဖြစ်ရှိသည်ဖို့မထင်ခဲ့ပေ။
နှစ်ဦးစလုံးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့တဲ့သူစုံတွဲများ အဆိုပါ '' ခေါ်ဆောင်သွားရာသီဥတု '' function ကိုအပေါ်အပြုသဘောတိုင်မှအုပ်စုဖွဲ့နှင့် အတန်ငယ်ကို '' 'အလုပ်မဖြစ်' 'function ကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောတိုင်ရန်။
20) Erectile အလုပ်မဖြစ်, ပျင်းတာဟာနှင့်နှစ်ဦးကိုဥရောပနိုင်ငံများကနေစုံတွဲအမျိုးသားများအကြား Hypersexuality (2015) - စစ်တမ်းက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် hypersexuality ၏အစီအမံများအကြားပြင်းထန်သောဆက်စပ်မှုကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု erectile လည်ပတ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်စပ်မှုဒေတာချန်လှပ်ပေမယ့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုမှတ်ချက်ချသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ခရိုအရှေနှင့်ဂျာမန်လူတို့တွင်, hypersexuality သိသိသာသာ erectile function ကိုအတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်းနှင့်ပိုပြီးပြဿနာကျရောက်နေတဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်.
21) ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ် Hypersexual အပြုအမူ (2015) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့တစ်ခုအွန်လိုင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အကဲဖြတ်, စိတ်ဓာတ်, နှင့်လိင်စရိုက်များ Variables ကို - စစ်တမ်းကဒီမှာစာရင်းအများအပြားသည်အခြားလေ့လာမှုများမှာတွေ့ရှိတဲ့ဘုံဆောင်ပုဒ်အစီရင်ခံ: Porn / လိင်စွဲဆင်းရဲတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရကိုကွောကျရှံ့) နဲ့ပေါင်းစပ် သာ. ကြီးမြတ် arousabilty (သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်မတရားသော) သတင်းပို့ပါ။
Hypersexual” အပြုအမူသည်မိမိ၏လိင်အပြုအမူကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ hypersexual အပြုအမူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနမူနာ ၅၁၀ မှလိင်တူချစ်သူ၊ ရိုးရိုးလိင်နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်နမူနာသည်အမည်မသိသောအွန်လိုင်း Self- အစီရင်ခံစာမေးခွန်းလွှာဘက်ထရီကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ဒေတာကြောင့်ညွှန်ပြ hypersexual အပြုအမူအထီးအဘို့ပိုပြီးအဖြစ်များကြောင်း, သတင်းပို့သောသူတို့အားအသက်အရွယ်အတွက်နုပျိုဖြစ်ခြင်း, ပိုမိုလွယ်ကူစွာလိင်စိတ်လှုပ်ရှားပိုပြီးလိင်ဘယျလိုမှကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်၏ခြိမ်းခြောက်မှုမှနည်းလိင်ဘယျလိုမှကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးဆက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုရန်, နှင့်ပိုပြီးထကြွလွယ်သော, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျ
22) လေ့လာမှု porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) တို့အကြား link ကိုရှုမြင် - လာမည့်လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များကိုအမေရိကန်မြို့ပြအသင်း၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ -
အမှန်တကယ်ကမ္ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှညစ်ညမ်းပိုနှစ်သက်သူကိုလူပျိုတို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ထောင်ချောက်အတွင်းဖမ်းမိတွေ့ပါလိမ့်မယ်, အခွင့်အလမ်းကိုယ်နှိုက်ကတင်ဆက်သည့်အခါအခြားလူများနှင့်အတူလိင်ဖျော်ဖြေနိုင်ခြင်း, တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်ကတင်ပြထားပါတယ်။ porn-စွဲယောက်ျား, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေဆငျးရဲခံရဖို့ပိုများပါတယ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အတူကျေနပ်ခံရဖို့လျော့နည်းများပါတယ် ဘော်စတွန်အတွက်အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာသောကြာနေ့ကတင်ပြတွေ့ရှိချက်လေ့လာအဆိုအရသိရသည်။
"ဒီအသက်အရွယ်အလိုက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများနှုန်းအလွန်အမင်းနိမ့်သည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီအုပ်စုအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျနော်တို့မြင်ကြ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တိုးရှင်းပြရန်လိုအပ်ပါသည် "ဟု Christman ကဆိုသည်။ “ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ထိုပဟေtoိတစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်”
23) ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြား Associative လမ်းကြောင်း (2017) - ဒီလေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးစာရင်းထဲတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုလူအများစုကလိင်မှုနှိုးဆွမှုရရှိရန်ပိုမိုနှစ်သက်ခြင်း (သို့မဟုတ်လိုအပ်မှုရှိခြင်း) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကြိမ်နှုန်းကိုလည်းတိုက်ရိုက်ညစ်ညမ်းထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားပူးပေါင်းများအတွက်ဆွေမျိုး preference ကိုဆက်စပ်သောခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာပါဝင်သူအဓိကအားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းလောင်လေ၏။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤတွေ့ရှိချက်တစ်ခု masturbatory အေးစက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (; Malamuth, 1994; Wright, 1981 Cline, 2011) ၏ညွှန်ပြဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမကြာခဏညစ်ညမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ခု arousal tool ကိုအသုံးပြုသည်လိင်စိတ်နိုးထ၏အခြားသတင်းရပ်ကွက်များကဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, ပိုပြီးတစ်ဦးချင်းညစ်ညမ်းမှ conditional ဖြစ်လာပေမည်။
24) "ငါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ကသုံးပြီးရပ်တန့်လို့မရဘူးထင်တယ်": ငယ်ရွယ်သြစတြေးလျ (2017) ၏နမူနာအကြားကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု - အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိသြစတြေးလျလူမျိုးတို့၏အွန်လိုင်းစစ်တမ်း။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသူများ (n = ၈၅၆) ကို 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကသင့်ဘဝကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့သလဲ' ဟူသောအဖွင့်မေးခွန်းဖြင့်မေးခဲ့သည်။
အဆိုပါဖွင့်မေးခွန်းတစ်ခုကို (ဎ = 718) မှတုန့်ပြန်တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုအနက်ပြဿနာအသုံးပြုမှု 88 ဖြေဆိုသူများက Self-ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို, arousal နှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်: ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုအစီရင်ခံတင်ပြသူကိုအထီးပါဝင်သူသုံးဒေသများရှိသက်ရောက်မှုမီးမောင်းထိုးပြ။ တုံ့ပြန်ချက် (အမျိုးသား, ဘိုးဘွားရိပ်သာ 18-19) "ငါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ထင်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ကသုံးပြီးရပ်တန့်လို့မရဘူး" ပါဝင်သည်။ တချို့ကအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုလည်းအပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း compulsive အပေါ်သက်ရောက်မှုများကဲ့သို့ဤအသတင်းပို့အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်တွေကိုအများအပြားနှင့်အတူပြဿနာအသုံးပြုမှု, သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းအမျိုးသမီးပါဝင်သူအကြံပြုအဖြစ်ဥပမာ; "ဒါဟာငါ့ကိုအပြစ်ရှိခံစားရစေသည်, ငါရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ ငါကိုယ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသွားရနျလိုအပျသညျဟုယူဆပုံကိုမကြိုက်ဘူးကြောင့်ကျန်းမာမဟုတ်ဘူး။ "(အမျိုးသမီး, ဘိုးဘွားရိပ်သာ 18-19)
25) လာမည့်လေ့လာမှုများဖော်ပြဟောပြောခြင်း - Urology ပါမောက္ခ Carlo Foresta, မျိုးဆက်ပွား Pathophysiology ၏အီတလီ Society ၏ဥက္ကဋ္ဌတို့က - အဆိုပါဟောပြောပွဲ longitudinal နှင့် Cross- အပိုင်းလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုပါရှိသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အထက်တန်းကျောင်းဆယ်ကျော်သက်များ (စာမျက်နှာ ၅၂-၅၃) ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ လေ့လာမှုက ၂၀၀၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမပြည့်ဝမှုသည်နှစ်ဆတိုးတက်ခဲ့ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှာ ၆၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
26) (မဟုတ် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်) ဒီမှာ MedHelp အပေါ် posted မှတ်ချက်များနှင့်မေးခွန်းများကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းကိုဆောင်းပါး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရည်မှတ်။ အဘယ်အရာကိုထိတ်လန်ရဲ့အကူအညီတောငျးလူ 58% 24 သို့မဟုတ်အငယ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတော်များများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်မသင်္ကာ လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့ -
အခြားမည်သည့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများအဖြစ်ထက်ပိုမိုသုံးကြိမ်အဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြခဲ့တဲ့သော - - အသုံးအများဆုံးထားသောစာပိုဒ်တိုများ "erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု" ဖြစ်၏။ "အင်တာနက်ညစ်ညမ်း", "စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်," နှင့် "porn ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်"
ရှင်းနေသည်မှာ porn တစ်မကြာခဏဆွေးနွေးတင်ပြဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်: "ငါသည်အတိတ်ကာလ4နှစ်ပေါင်း (အဆတစ်ပါတ်5မှ 6) မကြာခဏအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခဲ့ကြ," တယောက်သောသူရေးသားခဲ့သည်။ "ကျွန်မရဲ့လယ်ပိုင်း 20s အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေစတင်ခဲ့သည့်အခါငါ့အနှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်ကတည်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နဲ့စိုက်ထူရတဲ့နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပြီ။ "
နောက်ဆုံးပေါ်လှည့်ဖျားမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့် ပတ်သက်. အပိုဒ်: Sexologists တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဟာပြဿနာ (2016) Is ဟုဆိုကာခြင်းဖြင့် Porn-သွေးဆောင် ED ငြင်းပယ်
Reboot နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ဂါယူဆပါသည်ပတ်သက်ပြီးတော့! (PIED ကနေပြန်လည်နာလန်ထူနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်)
အင်တာနက်က Porn မှစွဲ: နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအင်တာဗျူး, WACK ၏အာဘော် BE
PIED - ကုထုံးဆရာ Brad Salzman (ဗီဒီယိုတို)